Yuusuf Garaad: "Tallaabooyinka uu Madaxweynaha Soomaaliya qaaday, waxay mudan yihiin bogaadin.." - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Qormooyinka/Yuusuf Garaad: “Tallaabooyinka uu Madaxweynaha Soomaaliya qaaday, waxay mudan yihiin bogaadin..”
Yuusuf Garaad: “Tallaabooyinka uu Madaxweynaha Soomaaliya qaaday, waxay mudan yihiin bogaadin..”
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa bogaadiyey tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ee isu soo dhoweynta dalalka Jabuuti iyo Eritrea.
Yuusuf Garaad oo ka mida wasiirada xilalkooda ku waayey isku shaandheyn uu sameeyay Ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa qoraal uu dhigay baraha bulshada ku taageeray doorka ay madaxweyne Farmajo iyo wasiirka arrimaha diabdda Axmed Ciise Cawad ka qaateen arrimaha Geeska Afrika.
“Tallaabooyinka uu Madaxweynaha Soomaaliya qaaday, Wasiirka Arrimaha Dibadduna uu ku wehliyo ee ku wajahan isu soo dhowaashaha iyo wax wadaqabsiga shucuubta Geeska Afrika Djibouti, Eritrea, Ethiopia iyo Somalia waxay mudan yihiin bogaadin iyo in lagu garab istaago…” ayuu qoraalka ku yiri Yuusuf Garaad.
Wuxuu intaas ku datay in Geeska Afrika ay ragaadisay colaado iyo abaaro. Isu soo dhowaashahan curdanka ahina uu horseedi karo in laga gudbo siyaasadihii cakirnaa ee Gobolka la haray.
Top Yusuf Garad
Ciidamada Sirdoonka NISA oo Muqdisho ku qabtay Xubno ka tirsan ururka Alshabaab
Ururka Caalamiga ah ee Culimada Islaamka oo si adag uga hadlay heshiiska Baxrayn iyo Israel